कमरेडबाट जबजकै हत्या प्रयास
राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नेगरी पाँच वर्षे म्याण्डेट पाएको नेकपा सरकारले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन गरिदियो । पार्टी कलह बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्ततः संसद् नै विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भयो । निर्वाचन आयोगको वैधानिकता कुरिरहेका दुवै समूहका नेताहरू यतिखेर देश दौडाहामा छन् ।
दौडाहाको दौरानमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को आत्मा जगाउने बजोड मौखिक स्पर्धा चलेको छ । पूर्व एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको जबजप्रति ओली र माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूमा बढी चासो छ । नेपालहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तिर लागेकाले जबजको असली उत्तराधिकारी आफू बनेको ओली समूहको दावी छ । उता माधव निकट नेताहरु ओलीले प्रधानमन्त्री पदसँग जबज साटिसकेको बताउँछन् ।
अर्थात्, २०७४ को निर्वाचनसँगै किनारा लगाइएको जबज पार्टी फुटपछि दुवै पक्षलाई प्रिय लागेको छ । भएकै सत्ता, शक्ति र अवसर गुमाएका नेकपा नेताहरूमा एकाएक जबजप्रेम छचल्किनुको उद्देश्य भने कार्यकर्ताको भावनामा खेलेर अनुयायी संख्या बनाउनु वा कायम राख्नुबाहेक अरू देखिन्न ।
विशेषतः केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अल्पमतमा परेको ओली समूहले जबजलाई शक्ति आर्जनको ब्रम्हास्त्र सम्झेको छ । यो आलेख जबज कसरी मुर्छित छ र यसलाई मार्ने दुस्प्रयास कुन रूपमा गरियो भन्नेमा केन्द्रित छ ।
गत तीन वर्षको घटनाक्रम सम्झदा जबजमा हकदावी गर्न समेत असमर्थ देखिएकाहरुले यसलाई धार्मिक अनुष्ठानको मन्त्रबाहेक अरू रुपमा बुझेको भनेर पत्याउन गाह्रो पर्छ । खाइपाई आएको वैभव, शक्ति र सार्बजनिक स्वीकृती गुमेपछि जबज सम्झनुको कारण राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझेका छन् । जबजको हत्या प्रयास गरेकाहरु नै अहिले जबजको पागलप्रेमी बनेको दृष्यले शिकार निलिसकेपछि गहभरी आशु पारेको गोही सम्झाइ रहेको छ ।
जबजको हत्या प्रयास कसरी भयो भन्ने पुष्ट्याइका निम्ति एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित जबजको प्रसंग यहाँ उल्लेख नगरौं । किनभने, त्यो महाधिवेशनका नेताहरूबीच अहिले चरम अविश्वास छ । त्यसकारण, जबजको त्यो सन्दर्भ मात्र उठाउँ, जहाँका हरेक अक्षर स्वयम् मदन भण्डारीले लेखेका हुन् ।
वर्तमान सरकारबाट जबज किन मुर्छित छ भन्ने बुझ्न यसले कल्पना गरेको राज्यव्यवस्था सम्झनुपर्छ । २८ वर्ष अगाडि प्रतिवादित जबजले भनेको छ– नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्म निरपेक्ष, जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गरिनेछ ।
यो प्रस्ताव नमानिदा एमालेले नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ मा फरक मत राख्यो । पाँचौं महाधिवेशनले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकारेकोे दस्तावेजहरुको अन्तर्वस्तु यही भयो । त्यसबेला नलेखिएको भनिएको संघीयताको गोरेटो जबजले कोरेकै थियो ।
संघीयता विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अवस्था हो । मदन भण्डारीले स्थानीय निकायबारे जस्तो परिकल्पना गरे त्यो संघीय संरचनाकै जग थियो । नेतृत्व चयन तथा प्रशासन, न्याय सम्पादन, समृद्धि लगायतका निर्णय स्वयम् जनताले गर्न सक्ने राज्यव्यवस्था हुनेछ भन्नुको तात्पर्य संघीयता नै हो, जनताप्रतिको विश्वास र जनवाद हो ।
अहिलेको संविधानले जसरी जबजमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रणाली (आरक्षण लगायत) बारे स्पष्ट नलेखिए पनि त्यसको मूल मर्म बलियोगरी पक्रेको छ । समानता एवम् सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजिवीहरु, निम्न आय भएका गरीबहरू तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको अग्रणी भूमिका रहनेछ ।
संविधानसँग जबजको घाँटी जोडिएको छ । संविधानमाथि प्रहार हुँदा जबज घाइते हुने रहेछ । बिडम्बना ! ऐतिहासिक जनमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारबाटै संविधानमाथि छुरा प्रहार भएको छ
यो जबजको मूलः मार्गनिर्देश हो– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली कायम राज्यव्यवस्था । विश्वका कम्युनिष्टहरुले लिएको शास्त्रीय मान्यता र अपनाएको शैलीबाट प्राप्त असफलताहरूको लामै व्याख्या गरेर मदन भण्डारीले निष्कर्ष निकाले– एउटा मात्र पार्टीको एकछत्र अधिकार संवैधानिक रुपमा र राज्यको बलसमेत प्रयोग गरेर कायम गर्न खोज्नु एक प्रकारको निरङ्कुशता र तानाशाही हो । त्यसकारण हामीहरू राजनीतिमा जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौं ।
कम्युनिष्टहरूले अनेक नामका जनवादलाई मार्गदर्शन मानिरहेको सन्दर्भमा मदन भण्डारीले प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीमार्फत पनि जनताको जनवाद स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर जबज अगाडि बढाए । त्यही मार्गदर्शनअनुसार, एमाले २०४८ यता र २०६४ पछि माओवादी निर्वाचनमा भाग लिँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल छ । जबजले अगाडि बढाएको यस्ता अनेक कार्यक्रममध्ये अधिकांश वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता जबजको कार्यक्रमिक लक्ष्य थियो । वाम एकताकै जगमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सफल भएको पृष्ठभूमिमा जबजले जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न वाम एकतालाई प्राथमिकतामा राख्न भन्यो । वाम एकता र सहकार्यले जनवादी आन्दोलन अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने त २०६२/०६३ जनआन्दोलन, २०७२ को संविधान लेखन र २०७४ को निर्वाचनमा पाएको अपार जनसमर्थनबाटै पुष्टि भयो ।
तर, पार्टी विभाजनपछि माओवादी हिँडेको सशस्त्र विद्रोहको बाटोमा जस्तो टिप्पणी सुनिन्छ, । मदन भण्डारीले त जनवादी व्यवस्था गर्न कुन बाटो हिँड्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिमा भरपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनले लेखे– हिंसाको मुकाबिला शान्तिले, षडयन्त्रको मुकाबिला सोझोपनले र धाँधलीको मुकाबिला सज्जनताले हुँदैन । जस्तालाई तस्तै जवाफ संगठित गर्नुपर्छ ।
मदनले नेतृत्व गरेको एमालेका उत्तराधिकारीहरुले सशस्त्र विद्रोहको बाटो हिँड्नुपर्ने आवश्यकतै परेन । माओवादीले त्यो बाटो समायो । यो तथ्य बुझ्न आफू आवद्ध पार्टी र आसिन पदभन्दा अलि माथि उठेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन नियाल्नुपर्छ । कतिपयले वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्था पनि एक्लो प्रयासको प्रतिफल सम्झेलान् । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (जनताको जनवाद), धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता अन्तर्निहित संविधान कम्युनिष्ट र समाजवादी शक्तिहरुको साझा संघर्षको प्रतिफल हो ।
यसर्थ, यो संविधानको मार्गनिर्देश मुताविक यसलाई कार्यान्वयन गर्दै, जनताको पक्षमा अझ सुदृढ बनाउँदै जानेको कित्तामा उभिने शक्ति/व्यक्ति नै जबजका खाँटी असली उत्तराधिकारी हुन् ।
यति चर्चा गरिसकेपछि प्रष्ट भन्न सकिन्छ– संविधानसँग जबजको घाँटी जोडिएको छ । संविधानमाथि प्रहार हुँदा जबज घाइते हुने रहेछ । बिडम्बना ! ऐतिहासिक जनमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारबाटै संविधानमाथि छुरा प्रहार भएको छ ।
प्रचण्ड–माधवहरुले काम गर्न नदिएकाले संसद् विघटन गरेको भन्ने ओलीको जवाफ निकै मधौरो लाग्छ । ठीक छ, अहिले आवेगमा हुनुहोला । तर, इतिहास कसरी लेखिएला ? हत्याको कारण यो हो भनेर मात्र अपराध माफ होला त ?
अनि, जबजको संकल्पमा परेको आघातको व्याख्या कसरी गर्ने ? जबजका मूलभूत मान्यता र संकल्प सम्बोधन गरेको संविधानमा प्रचण्ड–माधवको रिसले आगो लगाइदिएँ भन्ने जवाफ इतिहासमा कसरी अंकित हुन्छ ? २०६२/०६३ को जनविद्रोहले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको नेकपाले संविधानमाथि प्रहार गरेर वर्तमानमा के प्रमाणित गर्न खोजेको ?
धर्मनिरेपक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सुनिश्चित गरेको लिखतमाथिको हमलाले मुलुकलाई २०७२ अगाडिको अवस्थामा फर्काउन खोजेको छ । मुलुकलाई २०६३ कै अवस्थामा पुर्याउन यो पहिरो खसालिएको होइन भन्ने आधार बलियो छैन । पार्टी कलहको पहिरो संविधानमाथि खसाएर जबजले कल्पना गरेको राज्यव्यवस्थामा हलचल मच्चाइएको छ ।
नेकपा नेतृत्वकै सरकारले चालेको यो कदमले संविधानसँगै जबजको मूलमर्ममा प्रहार गरेको छ । पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जबजमा मदनले लेखेका छन्– क्रान्तिकारी सत्ता, जनताको सत्ता पनि विधानसम्मत् चल्नुपर्छ । कतिपय देशमा क्रान्तिकारी सत्तालाई संविधानभन्दा माथि राख्नाले भएका अराजकताको परिणाम हानिकारक भएको कुरा सर्वविदीत छ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्छ र संविधान सर्वोच्च हुनुपर्छ ।
बहुदलीय लोकतन्त्रमाथि गएको वैशाखमै प्रहारको प्रयास भयो । बहुदलीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक निकायको नियुक्ति कार्यकारीबाट मात्र हुन नदिन संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, त्यसबेला चर्को विरोध पछि फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याइयो । अध्यादेशकै आडमा व्यवस्थापिका प्रमुख र विपक्षी दलका नेताविनै एक्लौटी संवैधानिक नियुक्ति गरियो ।
बहुदलीय प्रणालीको अस्तित्व नमान्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशबारे अहिले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट मौन सहमति देखिए पनि यसको मूल्य भोलि कम्युनिष्टहरुकै लागि महँगो पर्ने प्रष्ट छ । किनकि, सरकारले जबजको कल्पना विपरीत राज्यव्यवस्था बन्ने आधारको बिजारापोण गरेको छ । र, राजनीतिक प्रतिशोधको तुष्टि लिन संविधानमाथि गरिएको प्रहारले जबजलाई भने कोमामा पुर्याएको छ ।
कोरोनाले थलिएको नेपाली खेलकुद चलायमान बन्दै
मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रहरीले माग्यो १२ अर्ब
टिचिङमा डाक्टर कुटपिटमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ
Categories Select Category Auto (825) Blog (3) English (1,398) Entertainment (927) Finance (1,934) Nepali (20,343) Sports (13,356) Tech (3,509) World (5,832)